warkii.com » Erdogan; in Aya Sophia Masjid laga dhigo waxay bishaaro u tahay furashada Masjidka Al-Aqsa.
Wararkii u dambeeyey iska hor imaad dhexmaray ciidamada DF iyo kuwa Kenya
Sawirro: Dibad-baxyo looga soo horjeedo Kenya oo ka dhacay gobolka Gedo
Muxuu yahay heshiiska ay gaareen Koonfur Galbeed iyo Puntland?
Al-Shabaab oo toogasho ku fulisay labo ruux + sababta
Wararkii u dambeeyey kulanka labada aqal ee BF Soomaaliya
Erdogan; in Aya Sophia Masjid laga dhigo waxay bishaaro u tahay furashada Masjidka Al-Aqsa.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa farxad weyn iyo guul ka muujiyay go’aankii Maxkamada sare ee Turkey maanta kasoo saartay kiiskii Aya Sophia oo mudooyinkii u dambeeyay socday.
Maxkamada Sare ee Turkey ayaana maanta kansashay go’aankii golaha Wasiirada Turkiga kaasoo ay 1934tii ugu badaleen Masjidka Aya Sophia kaniisad waxayna Maxkamada sheegtay in go’aankaas uu kahor imaanayo qaanuunka milkiyada maadaama uu iibsaday Maxamed Al-Faatix sidaasna uu Masjid uga dhigay waxayna Maxkamada sheegtay inaan maanta kadib loo adeegsan karin sifo aan Masjid aheyn.
Hadaba Madaxweynaha Turkiga ayaa saacad kadib go’aankii maxkamada soo saaray wareegto Aya Sophia markale dib looga dhigaayo Masjid asigoona sidoo kale Alle uga mahad celiyay inuu Allaah nasiibkiisa ka dhigay noqoshada qofka go’aankaan gaaray.
Erdogan ayaa wuxuu yiri; “Allah ayaa ku mahadsan oo go’aankaan nasiibkeyga ka dhigay” asigoona intaas raaciyay inay tani bishaaro u tahay furashada Masjidka Al-Aqsa oo ay Israel xooga ku heysato.
Dhanka kale shacab weynaha Turkiga ee muslimiinta ayaa siweyn u soo dhaweeyay go’aankii maxkamada ee maanta waxayna dadweyne badan isugu soo baxeen wadooyinka xili qaarkoodna booqasho ku tageen Aya Sophia si ay u cabiraan farxadooda ku aadan go’aanka Maxkamada.
Wararkii u dambeeyey iska hor imaad dhexmaray ciidamada DF iyo kuwa KenyaSeptember 26, 2020
Sawirro: Dibad-baxyo looga soo horjeedo Kenya oo ka dhacay gobolka GedoSeptember 26, 2020
Muxuu yahay heshiiska ay gaareen Koonfur Galbeed iyo Puntland?September 26, 2020
Al-Shabaab oo toogasho ku fulisay labo ruux + sababtaSeptember 26, 2020
Wararkii u dambeeyey kulanka labada aqal ee BF SoomaaliyaSeptember 26, 2020
Madaxweynaha Jabuuti oo QM u diray farriin la xiriirta heshiiska doorashooyinka SoomaaliyaSeptember 26, 2020
Dood ka taagan cidda xilka ku wareejineysa Rooble iyo Kheyre oo tallaabo qaadaySeptember 26, 2020
Qorshaha xildhibaannada HAWIYE ee maanta kadib kulankii xasaasiga ee xalaySeptember 26, 2020
Ciidamada DF oo sabab yaab leh u xiray odayaal caan ka ah gobolka Gedo, kadibna dalbaday kumanaan dollarSeptember 26, 2020
Faallo ku saabsan xeerka uu soo saaray wasiir Beyle ee muranka badan dhaliyeySeptember 26, 2020